Guddi xildhibaanno ah oo ka tirsan Baarlamaka Soomaaliya oo Baydhabo kula kulmay Guddiga fatahaadaha – Kalfadhi
Guddi xildhibaanno ah oo ka tirsan Baarlamaka Soomaaliya oo Baydhabo kula kulmay Guddiga fatahaadaha
Wafdi Xildhibaanno ah oo ka tirsan Baarlamaanka Federaalka ee Soomaaliya, oo shalay gaaray magaalada Baydhabo, ayaa maanta kulan looga hadlayay fatahaadaha ku qabtay Magaalada.
Wafdiga xildhibaannada ah oo deegaan doorashadooda ay tahay koonfur Galbeed, ayaa waxaa ay kulan la qateen, guddiga gurmadka fatahaadaha ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Cabdullahi Cabdi Caruushe, wasiirka gar-gaarka iyo maareynta masiinooyinka ee Koonfur Galbeed, oo sidoo kale ah guddoomiyaha Gurmadka fatahaadaha, ayaa sheegay In guddiga iyo xildhibaannada ay ka wada hadleen xaaladda halka ay mareyso iyo sidii shaqadda loo dar-dar gelin lahaa.
Wasiirka ayaa sheegay in Guddiga uu booqan doonno degamada Bardaale oo ah halka fatahaada ay saameysay iyo deegaanno kale.
“Guddiga waa kuwo xog oggaal ah, iyaga oo jooga xamar ayaan warbixinno kala qaadan jirnay”, ayuu yiri.
Imisa shir wada-tashi ayey galeen guddiga KMG ee soo diyaarinta Sharciga Doorashooyinka ee golaha Shacabka?
Xildhibaannada faham maka heystaan Heshiiska ka mid noqoshada Hay’adda Damaanada Maalgashiga darafyada badan?